Ncheta Ọnwụ Jizọs nke Afọ 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | IHE CHINEKE MEERE GỊ
N’abalị bọtara ụbọchị Jizọs nwụrụ, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-echeta àjà ọ ga-eji ndụ ya chụọ. O ji achịcha na-ekoghị eko na mmanya na-acha ọbara ọbara mee ihe a na-akpọ Nri Anyasị Ikpeazụ ma ọ bụ Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị. Ọ gwakwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m.”—Luk 22:19.
N’afọ ọ bụla, Ndịàmà Jehova na-ezukọ n’ebe dị iche iche n’ụwa iji cheta ọnwụ Jizọs. N’afọ 2014, a ga-echeta ọnwụ Jizọs n’abalị iri na anọ nke ọnwa Eprel, mgbe anyanwụ dachara.
Anyị ji ohere a na-akpọ gị òkù ka ị bịa n’ebe Ndịàmà Jehova ga-ezukọ n’ụbọchị ahụ. N’ụbọchị ahụ, a ga-akọwa uru ọnwụ Jizọs baara ụmụ mmadụ. Ị gaghị akwụ ụgwọ tupu gị abata, o nweghịkwa onye ga-ana gị ego. Onyeàmà Jehova nke nyere gị magazin a ga-agwa gị ebe dị gị nso a ga-eme ya nakwa oge ọ ga-abụ. I nwekwara ike ịga na www.jw.org/ig ka ị mata ebe ga-adịrị gị nso. Biko, chọta otu ebe dee ya edee na ị chọrọ iso Ndịàmà Jehova zukọọ n’ụbọchị ahụ ka ị ghara ichefu ya n’ihi na anyị achọghị ka ọ kwaa gị.